९ बुँदे सहमति गर्न बालुवाटार किन गएनन् महरा ?
काठमाडौं, २४ वैशाख । सत्तारुढ दल एमाले र एमाओवादीबीच विहीबार राति भएको नौबुँदे सहमतिपछि बालुवाटारमा दुवै दलका शीर्ष नेताहरुले प्रफुल्लित मुद्रामा फोटो खिचाए ।
फोटोमा प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र उपप्रधानमन्त्री भीमबहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल उपस्थित थिए । यसैगरी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव वर्षमान पुन र उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र कोषाध्यक्ष तथा कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेल सहभागी देखिन्थे ।
पुरानै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन गरिएको सहमतिपछि लिइएको तस्बिरमा एमाओवादीका महासचिव तथा प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा देखिएनन् । महरा तस्बिरमा मात्र नदेखिएका होइनन्, उनी ९ बुँदे सहमतिको लागि बोलाइएको छलफलमा नै सहभागी नभएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो ।
भारतबाट फर्केपछि सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको भन्दै प्रचार गरिएका महासचिव महरा बैठकमा किन गएनन् ? अस्वस्थताका कारण कि असहमतिका कारण ? बुधबार बिहानसम्म प्रचण्डलाई ओलीसँग पग्लन नदिने बताउँदै आएका उनले पछिल्लो समयसम्म आफ्नो अडानलाई किन निरनतरता दिन सकेनन्, राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र आशंका सुरु भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा मन्तव्य दिएका महासचिव महराले के हामी केपी ओलीको सरकारकै नेतृत्वमा जेल जानुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । एमाओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि वक्तव्य जारी गरेर प्रचण्ड गोर्खा उडेको दिन नेता महरा र कांग्रेसका रमेश लेखकले कांग्रेस-एमाओवादी समझदारी पत्रको ड्राफ्ट गर्दै थिए । तर पछिल्लो समय अचानक घटनाक्रममा बदलाव आएपछि महरा आक्रोशित बनेको स्रोत बताउँछ ।
सरकार परिवर्तनको पक्षमा दह्रो उभिएका पार्टीका सचिव वर्षमान पुनअनन्त भने तस्बिरमा हाँसीखुसी देखिन्छन् । महासचिव महराको अनुपस्थितिले तत्काल केही नभए पनि एमाओवादीभित्र आगामी दिनमा चर्कन सक्ने विवादलाई संकेत गर्दछ ।
विहीबार राति भएको ९ बुँदे समझदारीको भाषा पढ्दा यो तत्कालको लागि गरिएको समझदारीभन्दा एमाले र एमाओवादीको दिर्घकालीन सहकार्यलाई बढी महत्व दिएको बुझ्न सकिन्छ । आउँदो स्थानीय निकायमा सहकार्य गर्ने र बिस्तारै पार्टी एकतासम्म हुनसक्ने गरी गरिएको भनिएको भद्र सहमतिले हुन लागेको माओवादी एकतालाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? महराको अनुपस्थितिलाई एमाओवादीको माओवादी घटकसँग एकता कि एमालेसँग एकता भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडेर हेर्न मिल्ने एमाओवादीका एक नेताले बताए ।
नौ बुँदे सहमतिclose